wararka maanta-arlaadii.net » PROF JAWAARI oo loogu baaqay inuu mar kale u tartamo jagada afhayeenka Baarlamaanka iyo Shariif Xasan oo Nasashada loo diidi doono, Daawo Sawirada
Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isugu yimaadeen Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Xildhibaano, siyaasiyiin, aqoonyahano, haween iyo dhalinyaro ka soo jeeda deegaanada Koofur Galbeed ayaa waxaa lagu taageeray inuu mar kale isku soo sharxo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Sidoo kale waxaa kulankan looga hadlay mustaqbalka deegaanada maamulka Koofur Galbeed iyo waxyaabihii u qabsoomay Maamulka uu hoggaamiyo Shariif Xasan, mudadii 2-sano ee uu shaqeynayay.
Waxaa kaloo kulanka looga hadlay qorshaha uu Shariif Xasan ku doonayo inuu xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka ka dhigo nin aan ka soo jeedin beelaha Digil iyo Mirifle, si uu ugu tartamo xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Siyaasiyiintii, Haweenkii iyo Aqoonyahanadii kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu isku soo sharaxo xilka Guddoomiayaha Baarlamaanka Soomaaliya, si loogu hortago qorshaha Shariif Xasan uu wado.
Mas’uuliyiinta ka hadlay kulanka ayaa sheegay in Shariif Xasan weli uu joogo meeshii lagu doortay ee Magaalada Baydhabo, kuna fashilmay inuu Baraawe geeyo Maamulka.
Guddoomiye kuxigeenka Xisbiga Daljir Xasan Xaaji Ibraahim ayaa sheegay in Shariif Xasan uu ku guuldareystay inuu maamulka Koofur Galbeed dhaafin waayo magaalada Baydhabo, isla markaana dantiisa gaarka ah ka fiirsaday howlihii loo igmaday.
Waxaa uu sheegay in Shariif Xasan uusan ka dhabeyn balan-qaadyadii uu horay ugu sameeyay shacabka Koofur Galbeed.
Khaalid Cumar Cali oo ah Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegay in Shariif Xasan uusan wax horumar ah gaarsiin Maamulka Koofur Galbeed.
Wasiirkii hore ee Ganacsiga Aadan Saransoor ayaa isna sheegay in Shariif Xasan uusan u soo jeedin horumarinta deegaanada Koofur Galbeed, isla markaana ay u muuqato han uusan waligiis heli doonin oo ah inuu mar un noqdo Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya
“Hadii uu han siyaasadeed ku jiro, waa inuu marka hore is casilaa oo uu iska dhaafo damaca badan ee ku jira”ayuu yiri Aadan Saransoor oo ugu baaqay Shariif Xasan inuu iska casilo xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Ugu dambeyn waxaa kulanka laga akhriyay war murtiyeed ka kooban dhowr qodob oo looga hadlay mustaqbalka Koofur Galbeed iyo inuu u baahan yahay badbaado.
MUUQAAL:Safiirkii Ruushka u fadhiyay Turkiga oo toogasho lagu dilay (Sawirro)